Qaraxa Beyruut Ka Dhacay Oo Laga Cabsi Qabo Inuu Sii Cakiro Siyaasadda Dalkaasi? | Gaaroodi News
Qaraxa Beyruut Ka Dhacay Oo Laga Cabsi Qabo Inuu Sii Cakiro Siyaasadda Dalkaasi?
Qaraxa ayaa burburiyay qeybo badan oo kamid ah Beyruut
Qaraxa magaalada Beyruut ka dhacay dadka ku dhintay waxaa ka mid ah mas’uul sare oo ka mid ah xubnaha ugu cadcad mucaaradka dolwadda ka soo horjeeda.
Khilaafka siyaasadeed ee ka taagan dalka Lubnaan ayaa sabab u noqday in qaraxi shilka ahaa ee dhacay lagu tilmaamo mid abaabulan, maadaamaa uu waddanka siyaasadda ku kala qaybsan yahay.
Qaraxa marka uu dhacay kaddib waxaa soo baxay guux siyaasadeed oo dhinacyada siyaasadda dalakaasi isku haya ka imaanaya, iyada oo uu qaraxaasi ku dintay nin ms’uul ah oo ka mid ahaa kooxda dowladda ka soo horjeedday, oo ahaa xoghayaha xisbiga ‘Kataa’ibu Lubnaaniyah’.
Waxaa sidoo kale iscasilay Marwaan Xamaada oo baarlamaanka dalka Lubnaan ka tirsanaa kana mid ah mucaaradka dowladda ka soo horjeeda ka.
Arrimahaasi oo dhan ayaa laga cabsi qabaa iney sii cakiraan siyaasadda dalka Lubnaan, isla-markaana ay sii kala fogeyso dhinacyada isku haya siyaasadda.
“Qaraxan ka horba shacabka Lubnaan waxay ka kacsanaayeen dhaqaalaha dalka Lubnaan oo aad hoos ugu dhacay. Waddankan deynta lagu leeyahay waxay gaartay 91 balyan oo doolar, lacagaha dalka sidii ku habboneyd uma shaqeeyaan, iyada oo Ra’isal wasaare Xasan Diyaab oo la soo dooray December 2019-kii ayaa laga filayey inuu isbaddal weyn keeno, laakiin waxna wuu beddeli la’yahay. Todoobaadyadii u dambeeyey arrimaha sii cakirmayeyna waxaa ka mid ahaa kuwaas” ayuu yiri C/raxmaan Aadan Xadaana oo ka faallooda arrimaha carabta, oo BBC u warramay.
Maxaa ka socda dalka Lebnaan?
Qaraxa maadada ammonium nitrate ayaa hawada ku sii deyn kara gaas sun ah
Dalka Lubnaan ayaa baroordiiqaya kaddib marki uu qarax baaxad weyn ka dhacay magaalada Beyruut, kaas oo ay ku dhinteen in kabadan 100 qof , ugu yaraan 4,000 oo qofna ay ku dhaawacmeen.
Madaxweyne Michel Aoun wuxuu sheegay in 2,750 tan oo maaddada amooniyam amooniyare oo loo keydiyey hab aan amni ahayn lagu keydiyey bakhaar ku dhawaad lix sano.
Wuxuu madaxweynaha ku baaqay in Golaha wasiirrada ay maanta oo Arbaco ah shir degdeg ah isugu yimaaddaan, isagoo sheegay in laba todobaad oo xaalad deg deg ah la galiyay waddanka.
Maanta, dalka Lubnaan waxaa u billaabatay seddex maalmood oo baroordiiq ah.
Madaxweyne Aoun ayaa sidoo kale ku dhawaaqay inay dowladdu qoondeysay 100 bilyan oo rodol, oo u dhiganta 66 milyan oo doollar, oo lagu maalgeliyo xaaladaha degdegga ah.
Maxaa dhaliyay qaraxa? Qaaraxa waxaa ka dhashay qasaara aad u badan
Wasaraadda arimaha gudaha ayaa sheegtay in maaddada ammonium nitrate ee sida weyn u qaraxda lagu keydiyay makhaasiin ku yaalla dekadda.
Ra’iisul Wasaaraha dalka Lubanaan Xasan Diyaab ayaa qaraxa ku tilmaamay musiibo, waxaana uu wacad ku maray in lagula xisaabtami doono kuwa mas’uulka ka ahaa qaraxaasi ay boqollaalka qof ku waxyeelloobeen. Aagga dekadda uu Qaraxa ka dhacay
Waxa uu ka hadlay “makhaasiin khatar badan” oo dekadda ku yaallay tan iyo 2014, balse waxa uu intaa raaciyay in aanu ka hordhici doonin baadhitaanka.
Mas’uul ka tirsan dowladda Israa’iil ayaa BBC-da u sheegay in dalkiisa aanu wax lug ah ku lahayn qaraxa Beyruut.
Raadinta dadka badbaaday
Kooxaha gurmadka ayaa ee dalka Lubnaan ayaa raadinaya boqollaal qof oo ilaa hadda la la’yahay kaddib markii uu dhacay qaraxa weyn ee musiibada sababay Talaadadii.
Dhismeyaasha burburay iyo goobtii uu qaraxa saameeyay ayaa laga dhex baarayaa dad ay suurtagal tahay inay wali nool yihiin.
Qaraxan oo saameyn ballaadhan u geystay caasimadda Lubnaan ayaa sidoo kale laga dareemay Jasiiradda Qubrus, oo 240km (150 meyl) u jirta Beyruut.